प्रेमदिबसकै दिन कन्चन पुगे कोमामा ! दियो निभ्नै लाग्यो,अनिशालाइ यस्तो सन्देश पठाइन निरुले ( भिडियो ) – Namaste Host
प्रेमदिबसकै दिन कन्चन पुगे कोमामा ! दियो निभ्नै लाग्यो,अनिशालाइ यस्तो सन्देश पठाइन निरुले ( भिडियो )
February 15, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on प्रेमदिबसकै दिन कन्चन पुगे कोमामा ! दियो निभ्नै लाग्यो,अनिशालाइ यस्तो सन्देश पठाइन निरुले ( भिडियो )
काठमाडौ । चितवनमा भएको एउटा घट,नाले अहिले सबैको ध्या,न तानेको छ । सानै उमेरमा प्रेममा परेका जोडीको वियोगान्त अवस्थाले युवक जिवनको दोसाँधमा छन् भने एउटै गाउँका दुई परिवारबीच दु,स्मनीको अवस्था आएको छ ।